Zvinyorwa: Ibra anowana kubvumidzwa kwemitambo miviri yeJohn's fall - TELES RELAY
HOME » SPORTS Mitsara: Ibra anowana kubvumidzwa kwemitambo miviri yeJohnson yekuwa
Mitsara: Ibra anowana kubvumidzwa kwemitambo miviri yeJohnson yekuwa
Jeff Carlisle USA. mutambi wenhabvu
Jeff Carlisle anofukidza MLS uye tende reUnited States reESPN FC.
Zlatan Ibrahimovic yakagadzirirwa kaviri kubata vavariro yemuSean Johnson nemutsipa mu 2-0 kurasikirwa neNew York City FC vhiki yekupedzisira dzakawanda zvinotaurirwa ESPN FC.
Ibrahimovic achapotsa mutambo wemusha weSvondo. Colorado Rapids, pamwe chete neC24 May inosangana muOrlando City. Iko Galaxy iri kuedza kumisa tsanangudzo yezvikamu zvitatu zvakatevedzana. Ibrahimovic wechipiri muMLS ane zvikamu zvipfumbamwe mumitambo ye10 ino nguva, pamwe chete nematsigiri maviri. Carlos Vela inotungamirira sangano ne 13 zvinangwa mu13.
- Carlisle: MLS inofanirwa here naBrahimovic?
- Ibrahimovic anodana MLS kubvisa kutsoropodzwa kwevideo
Chiitiko ichi chakaitika pamutsara we86e, zvichienderana nekuenzanisa umo Ibrahimovic akakunda crossbar nepfuti uye kuedza kwekupanduka kwakaiswa pachinangwa ne Chris Pontius . Mutariri weNYCFC Sean Johnson yakawira pana Ibrahimovic mushure mokuguma kwemutambo.Pamberi kweGalaxy akatendeuka ndokubata Johnson nemutsipa vasati vaviri vatambi vakawira pasi. Vakatambi vose vakanyeverwa uye, mushure mekupedzisira, vakaramba vachirumana.
Iyo kukwikwidzana naJohnson inongova chiitiko chekupedzisira umo Ibrahimovic ari pakati. Akanga achangotongerwa kupiwa mari yakanaka nekuda kwekubata panguva yekukundwa kwe kurwisa Columbus Crew .
Uyu aimbova Manchester United uye mutezi weMilan akazivisawo vhiki yekupedzisira yekutaura kwemashoko. kutyisidzira uye kupikisana mushure mechikwata neChristin Salt defender Nedum Onuoha .
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/la-galaxy/story/3855965/sources-ibra-suspended-2-games-for-johnson-scrap
Nheyo PSG - PSG: Griezmann muParis, Tuchel inokuyeuchidza Henrique kuti arayire - FOOT 01
CAN 2019-Benin: Zvinangwa zveMichel Dussuyer